मधेसी युवा भन्छन्- नेताहरु लाज गर ! भारतले राष्ट्रपतिको होइन, नेपालकै अपमान गरेको हो (भिडियो) - Enepalese.com
मधेसी युवा भन्छन्- नेताहरु लाज गर ! भारतले राष्ट्रपतिको होइन, नेपालकै अपमान गरेको हो (भिडियो)
इनेप्लिज २०७४ वैशाख ६ गते १४:४४ मा प्रकाशित
सामाजिक अभियन्ता एवं तराईका स्थायी बासिन्दा रमेश प्रसाद साह भन्छन्- नेताहरु लाज गर ! भारतले राष्ट्रपतिको होइन, नेपालकै अपमान गरेको हो ।
नेताहरुलाई चुनौति दिँदै भन्छ्न्– हिम्मत छ भने कसम खाउ कि भारतका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री आउँदा विदा दिनेछैनौं, रिसिभ गर्न प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जानेछैन् । राज्यमन्त्री पठाउनेछौं । तब मात्रै समानता हुनेछ ।